Ifomu Kuqondile Gcwalisa Seal Machine Factory - China Kuqondile Ifomu Gcwalisa Seal Machine Abakhiqizi, abahlinzeki
umshini wokupakisha oketshezi ngokufakwa uphawu kwesisindo
Imishini yokupakisha uketshezi iyimishini yokupakisha yokupakisha imikhiqizo ketshezi, njengemishini yokugcwalisa iziphuzo, imishini yokugcwalisa ubisi, imishini yokupakisha ukudla okunoshukela, imikhiqizo yokuhlanza uketshezi nemishini yokupakisha ukunakekelwa komuntu siqu, njll., Konke kungokwesigaba semishini yokupakisha uketshezi.
Ifanele iziphuzo ezifana ne-soy sauce, uviniga, ujusi, ubisi, njll., Kusetshenziswa ifilimu le-0.08mm polyethylene, ukwakheka kwayo, ukwenziwa kwesikhwama, ukugcwaliswa kwamanani, ukuphrinta inki, ukufaka uphawu kanye nezinqubo zokusika konke kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Umshini Wokupakisha Isikhwama Seti-Triangle tower wempuphu yokusanhlamvu enesisindo sokuxuba
Nansi omunye wemishini yokupakisha itiye, umshini wokupakisha wetiye we-TRIANGLE, ngoba unxantathu, ngakho-ke ngokwanele ukuthinta amanzi, yonke into inganikeza isithako setiyi esanele, ngenxa yomshini wokupakisha unxantathu, ngakho-ke phakathi kwezimpahla ezinesikhala esanele ziyahamba, qinisekisa ukuthi izimpahla zinikezwe amandla aphelele, uhlobo lonxantathu, lokupakisha okwehlukile, itiye le-ginger, i-licorice, i-rose, okuluhlaza, okumnyama, itiye lemifino njalonjalo.
Ukuvuza Coffee Ukupakisha Machine
Ikhofi yokuconsa noma ikhofi lendlebe elenga uhlobo oluthile lwekhofi eliphathekayo elivalwe esikhwameni sokuhlunga ngemuva kobhontshisi wekhofi ophansi. Indlela yokukhiqiza: ngemuva kokudwengula isikhwama, vula izingcezu zephepha ezinhlangothini zombili bese ulilengisa enkomishini, uliphuze kancane ngamanzi ashisayo, bese uliphuza. I-Hanger Coffee yikhofi elisanda kugaywa elungele ukuphuza. Ukuphekelwa kwekhofi kuqedwa ngokuhluza i-drip, kanti i-asidi, emnandi, ebabayo, emnandi nephunga elisekhofi ibonakala kahle. Uma nje kunomthombo wamanzi ashisayo nenkomishi eduzane, ungayijabulela kalula. Ilungele ukusetshenziswa kwasekhaya, kwehhovisi nokuhamba.
Umshini Wokupakisha Isikhwama Setiye onesikhwama esikabili
Itiye luhlobo lomkhiqizo owomile, olungamunca kalula umswakama futhi lubangele ushintsho lwekhwalithi. It has ukumuncwa eqinile umswakama nephunga eyinqaba, futhi iphunga layo kuyinto esishubile kakhulu. Lapho amaqabunga wetiye agcinwa ngokungafanele, ngaphansi kwesenzo sezinto ezinjengomswakama, izinga lokushisa nomswakama, ukukhanya, umoya-mpilo, njll. Kuzodaleka ukusabela okungalungile kwamakhemikhali nemisebenzi ye-microbial, okuzoholela kuzinguquko kwikhwalithi yetiye. Ngakho-ke, lapho kugcinwa, yisiphi isitsha nendlela okufanele isetshenziswe, Zonke zinezidingo ezithile. Ngakho-ke, izikhwama zangaphakathi nezangaphandle zingamaphakethe agcinwe kahle kakhulu futhi asetshenziswa kakhulu.
imishini eminingi yokupakisha yokugcwalisa i-powder nokufaka uphawu
multi-function ukupakisha umshini, lapha khombisa professional for the powder, kusuka anolaka kuya emihle noma super powder isikhwama esikhwameni ukugcwaliswa futhi uphawu, inqubo iqala nge roll cylindrical ifilimu, mpo bagging umshini uzodlulisa ifilimu kusuka roll futhi Thru ukwakha ikhola (kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi ithubhu noma igeja). Uma idluliselwe kukhola ifilimu izobe isigoqeka lapho phezu kwamabha wokumisa mpo azokwelula futhi avale ngemuva kwesikhwama. Lapho ubude besikhwama obufunwayo budluliswa bugcwaliswa ngomkhiqizo. Uma sekugcwaliswe imigoqo yophawu evundlile izovala, ivale futhi isike isikhwama esinikeza umkhiqizo oqediwe ofaka isikhwama esinezimpawu eziphakeme phezulu / ezansi kanye nomshini owodwa ongemuva oqonde emuva.umshini wokugcwalisa isikhwama kufaka phakathi zonke izimboni ezifana nokudla okulula, ikhofi, izimpushana, ukudla okufriziwe, uswidi, ushokoledi, itiye, ukudla kwasolwandle nokuningi